बिबेकशिल नेपालीले सोध्यो, के नेपालका प्रधानमन्त्री `रअ´ प्रमूखका समकक्षी हुन? - Jagaran Post
जागरणपोस्ट ७ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०९:३५ राजनीति
के नेपालका प्रधानमन्त्री भारतीय खुफिया प्रमुखका समकक्षी हुन्?
(प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि साझा पार्टीको प्रेस विज्ञप्ति)
के रअका प्रमुख उनको नेपाली समकक्षी नेपालको गुप्तचर निकायका प्रमुखको निमन्त्रणामा आएका हुन्? के त्यसरी आउँदा उनले प्रधानमन्त्रीसँग ‘शिष्टाचार भेट’ गरेका हुन्? यदि हुन् भने त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यालयले तुरुन्त स्पष्ट पारोस्। होइन भने, देशको प्रधानमन्त्रीको मर्यादाको ख्याल भयो कि भएन?
महासचिव पौडेलको विचारलाई साथ नदिने उपाध्यक्ष गौतमको धारणा
ओलीले प्रचन्डलाई सोधे – कुन प्रचण्ड सक्कली, कुन
प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा
सचिवालय बैठक शुरु